सरकार ! भित्री बस्तीमा गस्ती खै ? – Glammandu Online
सरकार ! भित्री बस्तीमा गस्ती खै ?
kusum	 May 6, 2020
म घरको छतमा छु। रिंगरोडमा साना / ठूला सवारी साधनहरु निर्बाध चलिरहेका छन्। बाटोमा मान्छेहरु समुह समुहमा गफिंदै हिंडिरहेका छन्। बस्तीभित्र मोटरसाइकल चलिरहेका छन्। इभिनिंग वाक गर्नेमा बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्म सबै उमेरका छन्। सबैले घांटीमा मास्क लगाएका छन्।
सुरक्षाकर्मी मेनरोडमा छन्। मेन रोडमा मान्छे बस्दैनन्। मान्छे भित्री बस्तीमा हुन्छन् सुरक्षाकर्मी भित्री बस्तीमा छैनन्। भित्री बस्तीको आवतजावत नियन्त्रण नगरेसम्म लकडाउनको कुनै अर्थ छैन। सरकारले यो तथ्यलाई किन बुझ्न सकेको छैन ? के कोरोना भाइरस सरकार हिंड्ने मुख्य बस्तीमा मात्र हिंड्छ ?
हामी जनताले कोरोना भाइरसलाई किन नजरअन्दाज गरेका छौं ? के हामी नागरिकमा यसको गहिराई थाहा नभएको हो ? १०० जना पुग्न समय लाग्छ। त्यसपछि १००० जना पुग्न धेरै समय लाग्दैन।
उपत्यका भित्रिने दर्जनभन्दा धेरै नाका छन्। ती नाका शिल गर्न कसले रोकेको छ ? पावर छ भन्दैमा जो पायो त्यहि व्यक्तिलाई पास दिने अधिकारीलाई कारबाही किन नगर्ने ? सबै नाकामा २४ घण्टा गस्ती किन नबढाएको ? यस्तै लापरबाहीले गर्दा धेरै देश कोरोना संक्रमणको दलदलमा फसेको कुरा कहिले आत्मसात गर्ने ?
छिमेकी भारतमा संक्रमित र मृतकको ग्राफ बढिरहेको छ। भारतमा न्युनतम ५ – १० लाखलाई कोरोना संक्रमण हुने र हजारौंको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ। त्यो आगोबाट बच्न हाम्रो तयारी पुगेको छैन। अझैपनि बिभिन्न ठाउँबाट आवतजावत चलिरहेको छ। यसको बारेमा कतै पनि छलफल, बैठक भएको छैन। के हामी लपस्तरो भएका हौँ ?
कृपया ! घरभित्रै बसौं। मर्निंग वाक / इभिनिंग वाक नगरौं ! हामी हिंड्ने बाटोमा को हिंडेको छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। हाम्रा जुत्ता चप्पलमा भाइरस चिप्केको छ कि, हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले फेरेको सासमा संक्रमित व्यक्तिको सास मिसिएको छ कि छैन ? हामीलाई थाहा हुँदैन।
फिल्ममा काम गरेको पैसा माग्न दुई हात जोड्नुपर्छ : पल शाह
सोनाक्षीले एक्कासी किन डिलिट गरिन् ट्विटर अकाउन्ट ?
coronacorona virus nepaldr rabindra pandeyGlammanduNepali Movienepali news portalNepali online newsonline khabar news
kusum 77 posts0comments
आज बिहीबार: भगवान श्री हरि विष्णुको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस तपाईको राशिफल
सुशान्तसिंहको अन्तिम फिल्म ‘दिल बेचारा’को ट्रेलरले बनायो सबैलाई भावुक
सुशान्तको अन्तिम फिल्म ‘दिल बेचारा’को रिलिज मिति तय, निशुल्क हेर्न मिल्ने
‘ए मेरो हजुर ४’ दशैंमा रिलिज नहुने